Safari Technology Preview kinova 63 dia misy | Avy amin'ny mac aho
Tsy isalasalana fa ity mpikaroka fanandramana ity dia efa ampahany amin'ny Mac maro ary ampiasaina ho farafara fitiliana ho an'ny Apple tenany sy ireo mpampiasa azy. Rehefa mametraka an'ity browser ity amin'ny Mac-nao izay ataontsika ampio Apple mivantana amin'ny fampandrosoana ny Safari Manatsara ny traikefan'ny mpampiasa aho noho izany.
Ity dia fitetezana mahaleo tena sy maimaimpoana tanteraka izay afaka ampiasain'ny olona rehetra manana Mac, arakaraka ny hanandraman'ny mpampiasa ity mpitety tranonkala ity no ahazoana valiny bebe kokoa azon'i Apple mamantatra lesoka ary mampihatra ny fanitsiana ilaina. Apple dia tena mandrisika amin'ity browser test ity ary isaky ny tapa-bolana dia manana kinova vaovao misy izahay. Toa ny fanovana kely sy ny fanatsarana natao tamin'ny tsirairay amin'ireo kinova no manatsara ny fitetezana.
Ary koa, satria tadidintsika foana ireo fanavaozana izay tonga amin'ny Safari Technology Preview, dia ny fametrahana ny browser tsy ilaina ny manana kaonty mpamorona na mitovy aminy, Na iza na iza dia afaka misintona maimaimpoana hanandramana amin'ny Mac. Ny hany mila ataontsika dia ny miditra amin'ny tranokalan'ny mpamorona ary misintona ny kinova farany misy Fijery teknolojia Safari.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Safari Technology Preview kinova 63 dia misy izao
Amboary ny baraovana Safari amin'ny macOS
Ny tsingerintaona faha-20 an'ny iMac